Hawlgaladda Hub ka dhigista oo aan saamayn Degmooyin Muqdisho ka tirsan. – Hornafrik Media Network
Hawlgaladda Hub ka dhigista oo aan saamayn Degmooyin Muqdisho ka tirsan.
hawlgal ay Dawladda Somalia ugu magac dartay Xasilinta Caasimadda ayaan saamayn qaybo ka mida Muqdisho, halka qaybo kalana si xawli ah looga dareemayo.
Degmooyinka Kaaraan, Huruwaa, Yaaqshiid, Dayniile, iyo Hawlwadaag ayaa lagu waramayaa inaysan maalina saamayn hawlgaladda socda. waxaana Degmooyinkan aysan Hawlgaladdu saamayn ay isugu jiraan kuwa ay ku xoogan yihiin Alshabaab iyo kuwo ay fariisimo ku leeyihiin Maleeshiyaad Hubaysan.
warar ay heshay Hornafrik ayaa muujinaya inaysan marnaba hawlgaladdu gaarsiisnayn meelaha ay Alshabaabku ku dhuumaalaystaan ee Muqdisho. waxayna hawlgaladdu ku eg yihiin oo kaliya Xaafadihii markii horaba ay Dawladda Somalia ku xooganaayeen.
hawlgaladan ayaa intii ay socdeen waxaa lagu soo qab qabtay Hub Ganacsi ahaan loo iibiniyay iyo Qoryo ay lahaayeen Askar isla ciidanka Dawladda ka tirsan. iyadoo aysan jirin illaa iyo hadda hub ay leeyihiin Argagixisaddu oo la soo qabtay.
Waddooyinka Muqdisho oo is bedel laga dareemayo iyo hubkii faraha badnaa oo ka yaraaday
weeraro Argagixisanimo oo London ka dhacay.